Version CMO London sy Club des Femmes de la Diversité CFD, miaraka hanampiana hanokatra fotoana tsara kokoa ho an'ny vehivavy any Cape Verde
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Version CMO London sy Club des Femmes de la Diversité CFD, miaraka hanampiana hanokatra fotoana tsara kokoa ho an'ny vehivavy any Cape Verde
Aprily 10, 2019
Zava-dehibe tokoa ny fanangonana vehivavy mpandraharaha hihaona avy any Eropa sy Afrika ary manerantany hifanakalo hevitra momba ny fahafaha-manao sy hiara-mitarika ny fanovana.
Elizabeth Patricia Traore-Andony, MD, CMO London, ary ny filohan'ny Dina Mendes avy amin'ny Club des Femmes de la Diversité, dia miaraka ao Cape Verde mba hirotsaka amin'ny fanontaniana momba ny miralenta amin'ny orinasa sy ny maha-zava-dehibe ny lanja vehivavy mpamorona sy ny fandraharahana amin'ny orinasa kely sy salantsalany.
Miara-mino izy ireo fa ny fananganana orinasa tsara kokoa any Cape Verde sy ny hetsika voalohany no lakilen'ny fanampiana amin'ny famahana ny olana ankehitriny sy ho an'ny taranaka ho avy.
Raha naneho hevitra momba ity fandraisana andraikitra ity i Elizabeth Patricia Traore-Andony dia nilaza hoe: “Manantena aho fa afaka mandray ny fananganana sendika ho an'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha ary afaka mandray dingana bebe kokoa manoloana an'io tanjona io. Manome lanja ny anjara asan'ny vehivavy eo amin'ny fiainantsika isika, saingy tokony hanome lanja ny andraikitry ny vehivavy amin'ny maha mpandraharaha antsika. "
Ny Travel Leaders Network dia manomboka amin'ny fanitarana lehibe iraisam-pirenena
Minisitry ny fizahantany any Egypte: ny fizahantany no lakilen'ny fifandraisana akaiky sy ny fandriampahalemana
Dokotera any India: TSY manavotra anao amin'ny COVID-19 ny firakofanao tena amin'ny kotoran'omby